Raw Cetilistat Powder (282526-98-1) Ndị na-emepụta - Phcoker Chemical
Ceilistat ntụ ntụ bụ onye na-eme ihe nkiri akwụkwọ nke pancreatic lipase nke Alizyme mepụtara maka ọgwụgwọ oke ibu na njikọta metụtara ọrịa… ..
ikike: 1410kg / ọnwa
Raw Cetilistat ntụ ntụ (282526-98-1) video
Raw Cetilistat ntụ ntụ (282526-98-1) Nkọwa
Raw Cetilistat ntụ ntụ bụ akwụkwọ ọhụụ pancreatic lipase inhibitor nke Alizyme mepụtara maka ọgwụgwọ nke oke ibu na ọrịa shuga na ọrịa ndị ọzọ. Ọ na-eme site na igbochi pancreatic lipase, enzyme nke na-agbaji triglycerides na eriri afọ. Na-egbochi abụba (triglycerides) na nri ka ọ ghara ịgbagha ma gbanwee ghọọ abụba abụba na-enweghị ego nke ahụ nwere ike itinye na ya. Raw Ceilistat ntụ ntụ belata nke ukwuu ma nwee ndidi karịa ka a na-ede aha ya.
Raw Ceilistat ntụ ntụ (282526-98-1) Nkọwa
Product Name Raw Cetilistat ntụ ntụ
Chemical Aha Okpukpo uzo nke azu uzo (Alt-962); Xinliorlistat; uzu ogwu nke azu (282526-98-1)
Brand Name Cametor ma ọ bụ Oblean
Klaasị ọgwụ ọjọọ Ntugide oke ibu
molekụla Fnhazi C25H39NO3
molekụla Wasatọ 401.58
Mgbu Point 72.0 ka 76.0 Celsius C
Fna-agbanyeghachi Point 74 ° C
Agba Na-acha ọcha Crystal
Antinye Jiri emeso ibu oke nsogbu
Ihe azu ugbo ocha (282526-98-1)
Nke a, bụ nke a maara dịka ATL-962, bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-egbu egbu nke Alizyme maka ọgwụgwọ oke ibu na co-morbidities, gụnyere ụdị ọrịa shuga 2. Ọ na-eme n'otu ụzọ ahụ dịka onye na-aṅụ ọgwụ ọjọọ (Xenical) site na-egbochi lipase pancreatic, enzyme nke na-akụda triglycerides na eriri afọ. Enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịmịnye ya hydrolyzed n'ime acy fatty acids na-adịghị emetụta ya ma bụrụ nke a na-enweghị atụ. A ghaghị iji ọgwụ a na-eri nri dị ala na-edozi ahụ na ọtụtụ mmega ahụ iji nweta ihe kachasị mma.
N'ọnwụnwa ụmụ mmadụ, e gosipụtara eriri anụ ahụ na-eme ka ọ ghara ịdị na-eme ka ọ dị njọ, kama ọ na-emepụta mmetụta ndị yiri ya dị ka mmanu mmanu, ihe ndị na-adịghị ọcha, ụbụrụ na-adịghị mma, mmegharị ụbụrụ ugboro ugboro, na flatulence. O yikarịrị ka ọ ga-etinye aka na nchebe ahụ nke vitamin na-edozi ahụ na abụba ndị ọzọ nwere ike ịme ka ọ ghara igbochi ya, na-achọ ka a gụnye vitamin iji gbochie nsogbu.
Onye ọgwụ Pharmaceuticals Medical Devices Agency of Japan (PMDA) kwadoro na September 20, 2013. Ọ bụ Norgine na Takeda mepụtara ya, wee jiri ahịa dị ka Oblean® site Takeda na Japan.
Akwukwo nchekwa (282526-98-1) Ngosipụta nke Action
Akwukwo unilistat bụ ntụ ntụ dị arọ na-eji nri calorie obere. Cetilistat bụ onye na-eme ihe na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ, ọ na-arụ ọrụ site na igbochi abụba dị ukwuu nke na-agbada ma tinye ya n'ahụ. Akpa ntụ ntụ a dị arọ dị ka onye na-egbu egbu egbugbere ọnụ na ọ na-arụ ọrụ na usoro digestive ebe ọ na-egbochi ihe nke enzyme lipolytic a na-akpọ lipase. Akwukwo a bu ihe aru na-eji mee ka abuba di ocha. Ot'odi, mgbe a na-enye ogwu a n'akuku nri, o na ejiko ya na egbugbere ọnụ, si otú a gbochie ha imebi abuba. Ụdị ndị na-adịghị na-eme ka mmiri ghara ịdị na-eme ka ọ ghara ịdị na-emegharị ahụ, na-eme ka ụbụrụ na-abawanye ụbụrụ na-eme ka ọ ghara ịdị irè ma belata abụba. Mgbe eji ya na nri calorie dị ntakịrị, ọ nwere ike inye aka melite ọnwụ ọnwụ ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrịa buru ibu ka ha laghachi azụ, si otú ahụ na-eme ka ohere ịnweta ọnwụ na-efu. Otú o si eji ya eme ihe dị ka ntụpọ kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ na-egbochi lipase pancreatic.
uru nke eriri Ceilistat (282526-98-1)
Edu Mbelata ibu arọ
Ọgwụ nke ọrịa shuga
Tole Anabatacha ya nke ọma ma e jiri ya tụnyere ọgwụ ndị ọzọ
Akwadoro Ililistat na-atụ aro (282526-98-1) Ụdị
Epeepe a na-ahụ maka akwụkwọ a dị ka mbadamba maka iji okwu ọnụ mee ihe, nke nwere 120 mg nke freeil a na-enye n'efu. Ntụziaka a na-atụ aro bụ 120 mg ugboro atọ n'ụbọchị ozugbo ọ bụla nri. A na - eji ọgwụ na - eri nri iji jide n'aka na ọ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe a na - agba nri ahụ, nke mere na enwere ike iwepụ abụba sitere na nri ahụ n'ụzọ dị irè.
mmetụta nke eriri Ceilistat (282526-98-1)
Ndị ọrịa na-agwọ ọgwụgwọ maka oke ibu na Cetilistat ntụ ntụ nwere ike ịta ahụhụ site na nsonaazụ. Ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na nke a emee. E nwere ụfọdụ mmetụta dị iche iche maka nrụtụ aka:
▲ Abụba na stool
▲ Ntọala na ihapu
▲ Ọ na-afụ ụfụ
▲ Ncha akwa
▲ Mbibi nke ụda
▲ Ọ bụ mgbe niile
▲ Mgbu na afo
▲ Nausea ma ọ bụ vomiting
▲ Ọnụ ọkụ
▲ Obi mgbaghara
▲ Ike gwụrụ ma ọ bụ adịghị ike